सनराइज बैंकद्वारा देशभरी शाखाबाट प्राप्त हुने गरी कार्डलेस भुक्तानी सुविधा सुरु, कसरी प्रयोग गर्ने ? - bampijhyala.com
Home > समाचार > वित्तिय > सनराइज बैंकद्वारा देशभरी शाखाबाट प्राप्त हुने गरी कार्डलेस भुक्तानी सुविधा सुरु, कसरी प्रयोग गर्ने ?
सनराइज बैंकद्वारा देशभरी शाखाबाट प्राप्त हुने गरी कार्डलेस भुक्तानी सुविधा सुरु, कसरी प्रयोग गर्ने ?
६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५ bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । सनराइज बैंकका ग्राहकहरुले हालसम्म आफ्नो डेबिट कार्डको प्रयोग गरी एटीएम मेसिनबाट रकम झिक्दै आएकोमा अवदेखी कार्डलेस भुक्तानी सेवाको सुरुवात गरेको छ । यसरी सनराइज बैंकको ल्याएको नयाँ प्रविधी अनुसार कार्डलेस भुक्तानी प्रयोग गरी कार्डको प्रयोग बिना नै एटीएमबाट रकम झिक्न सक्नेछन् ।
यस सेवा अन्र्तगत ग्राहकहरुले मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी कार्डलेस विदड्र अप्सनमा गई आफूले भुक्तानी गर्न चाहेको रकम हाली सब्मित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि ग्राहकको सम्बन्धित मोबाइल नम्बरमा ओटीपी कोड एसएमएसमार्फत आउनेछ । बैंकको एटीएममा गई कार्डलेस विदड्र अप्सनमा रोजी एसएमएसमा आएको कोडको प्रयोग गरी सजिलै कार्ड बिना नै रकम झिक्न सकिने छ ।
नयाँ र अत्याधुनिक यस प्रबिधिको प्रयोगले भौैतिक कार्ड बोक्न बिर्सेको अबस्थामा पनि मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग एटीएम मार्फत सजिलै रकम झिक्न सकिने छ । सन्राइज बैंकले यस अघि पनि मिस्ड कलबाट बत्तिको बिल भुक्तानी, मोबाइल बिल भुक्तानी जस्ता सजिला र आधुनिक सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । यो सुविधा ग्राहकहरुले बैंकको देशभरी रहेका सबै एटीएममार्फत लिन सकिने उक्त बैंकले जनाएको छ ।
३३ औं वर्षमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ
दोलखा जिल्ला मै पहिलो पटक दोलखा स्वास्थ्य चौकि दोलखालाई पोषण मैत्रि स्वास्थ्य संस्था घोषणा ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५
काठमाण्डौंबाट सिंगटी तर्फ आउँदै गरेको बा ४ ख ५३६१ नम्बरको बस भीनपा-६ रमितेडाँडामा दुर्घटना हुँदा ४ घाइते ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५
अखिल फोर्सको शक्ति प्रदर्शन ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५
Smart Lockdown Recommended ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५
रामकृष्ण ढकाल र वेनिशा पौडेलको स्वरमा मार्मिक गीत ‘नयाँ जीवन’ सार्वजनिक ६ श्रावण २०७८, बुधबार १०:४५